Mee ka nchedo nchedo maka Galaxy Note 9 dị ugbu a | Gam akporosis
Itinye ego buru ibu na ama ama anaghị eme ka anyị nwee ọ enjoyụ na njedebe zuru oke, kamakwa na-emesi anyị obi ike, site n'aka onye nrụpụta, na ọnụahịa ahụ ga-enweta mmelite n'oge afọ abụọ na-esote, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu na Afọ 3 maka mmelite nche.
Samsung Galaxy Note 9 ka malitere ịmalite ịnya mmelite nche ọhụrụ, oge nke a kwekọrọ na ọnwa Mee. Mmelite a, nke dị maka awa ole na ole na Russia, France na Bulgaria, na-eji nke nta nke nta erute mba ndị ọzọ ma na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọrụ dịka mmelite gara aga.
Izu ole na ole gara aga, Samsung wepụtara mmelite maka ọnụahịa a, mmelite nke nyere mmelite na nkuku nke ele igwefoto n'ihu (belata ya) na mgbakwunye ikwe mmemme abalị mode ọrụ.
Nwelite Mee, na mgbakwunye na ọrụ ọhụrụ abụọ ahụ eruteghị mba niile ebe ekesara Galaxy Note 9 site na mmelite nche, doziri a usoro nke dị oké egwu chinchi na gam akporo, kpọmkwem 7 gbakwunyere a iri na abuo elu na agafeghị oke ọma.
Ọ na - edozikwa ụfọdụ adịghị ike ọchọtara nke achọtarala na nhazi usoro nke Galaxy Note 9. Ọ bụrụ na ịnabatabeghị mmekorita kwekọrọ na nke na - akpọ gị ka ị melite njedebe gị, ịnwere ike ịnwale manye ya aka site na nhọrọ nhazi nke ọnụ gị, site na ịga na Mmelite ngwanrọ na ịkwụsị nbudata akpaka. N'oge ahụ, ọnụ ga-elele ma ọ bụrụ na ọ dịlarị.
Nke a bụ ihe Samsung Galaxy Note 10 nwere ike ịdị
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere ịnata mmelite a, dịka m na-akwado mgbe niile, ịnwere ike gafere ha na weebụsaịtị SamMobile ibudata ya ma wụnye ya aka na ngwaọrụ gị, na usoro nke ga-ewe naanị nkeji ole na ole. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ozi ọma ọ na-enye anyị, anyị nwere ike ịjụ nhọrọ a ma chere maka ọkwa kwekọrọ na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mee ka nchedo nchedo maka Galaxy Note 9 dị ugbu a